ဖယ်ကြဉ်ခံထားရတဲ့အခါ... - For her Myanmar
ကိုယ့်တုန်းကလည်း ဒါမျိုးအလုပ်ခံခဲ့ရတာ.. သူများကိုလည်း ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ မဟုတ်သေးဘူးနော်….
နည်းနည်းတော့ ခံရဖူးမယ် မသိမသာကော သိသိသာသာကော ဖယ်ကြဉ်ခံရတာတွေရှိခဲ့ဖူးမယ်။ ကိုယ်ကလည်း သူများကို ဖယ်ကြဉ်ခဲ့ဖူးတာတွေရှိရင်လည်း ရှိဖူးမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုတော့ မေ့တတ်ကြပြီး ကိုယ် ဖယ်ကြဉ်ခံထားရတာကိုတော့ မမေ့တတ်တာဟာ သဘာဝပါ။ ဆိုတော့ ကိုယ်ကလည်း သူတစ်ပါးကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ ဖယ်ကြဉ်ခဲ့ဖူးသလို ကိုယ့်ကျလည်း အကြောင်းရင်း မယ်မယ်ရရ တောင် မရှိဘဲ ဖယ်ကြဉ်ကြတာမျိုးက ဖြစ်နေကျလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ဖယ်ကြဉ်ခံရတာကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်မကောင်းလွန်းလို့ ဖယ်ကြဉ်ရတာမျိုး၊ ကိုယ့်ထက်သာမနာလိုစိတ်ကြောင့် ဖယ်ကြဉ်တာမျိုး အမျိုးမျိုးပေါ့။ ဒီထဲမှာမှ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ဒုက္ခပေးနေတဲ့ လူမျိုးကလွဲရင်တော့ အကြောင်းရင်းမရှိဘဲ တစ်ဖက်သားကို ဖယ်ကြဉ်တာမျိုးက သိပ်တော့ အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။
တကယ်လို့ လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီလူရဲ့ တုန့်ပြန်မှုအားက ကြောက်စရာတောင် ကောင်းပါတယ်။ သူ့စိတ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်တာမို့ ပိုဆိုးလာတာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ့်ကို ဖယ်ကြဉ်ထားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ အခြားတစ်ယောက်ကို ဖယ်ကြဉ်ထားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောတွေကတော့ အတူတူနီးနီးပါပဲ..
Related Article >>> အထီးကျန်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဒါလေးတွေ လုပ်ကြည့်ကြပါ။
ဘယ်သူပဲ ဖယ်ကြဉ်ခံထားရသည်ဖြစ်ပါစေ၊ လူတွေ ဖယ်ကြဉ်ခံရပြီဆိုတဲ့အခါ…
ဖယ်ကြဉ်ခံရသူတိုင်းရဲ့ တိုက်ကွက်က ဒါပဲလေ ရွဲ့လုပ်မှာပဲ။ ကိုယ့်ကို ဖယ်ကြဉ်သူက ဒါမကြိုက်ဘူးဆို ဒါချည်းပဲလုပ်တယ်။ ဘာလို့ဖယ်ကြဉ်တုန်းလို့ သူတို့ စဉ်းစားချင်မှ စဉ်းစားမယ်၊ လူပဲ လူကြားထဲပဲ နေချင်မှာပေါ့။ ကိုယ်ပါလာရင်ပဲ မပျော်ရတော့သလိုလို ၊ ကိုယ်ဝင်ကစားရင်ပဲ ရှုံးတော့မှာလိုလို ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရွဲ့လုပ်တာက သဘာဝပါပဲ။ ကိုယ့်ထက် တော်လို့ပဲ ဖယ်ကြဉ်ပါစေ၊ ထုံသလိုလို အ သလိုလိုမို့လို့ ဖယ်ကြဉ်ပါစေ၊ အရမ်းတော်လွန်းလို့ပဲ အလိုလိုနေရင်း အမြင်ကတ်ပြီး ဖယ်ကြဉ်နေပါစေ ဘယ်လိုပဲ ဖယ်ကြဉ်ကြဉ်၊ ဖယ်ကြဉ်ခံရတဲ့လူမှန်သမျှ နည်းနည်းလေးတော့ ရွဲ့လုပ်ပြလိုက်ရမှဆိုတဲ့ အထဲကချည်းပါပဲ။ တကယ်က ရွဲ့လုပ်တာက နောက်ထားပါ.. လူတစ်ယောက်ကို ဖယ်ကြဉ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အကြဉ်ခံရတဲ့သူသည် ကောင်းတဲ့ဘက်ထက် မကောင်းတဲ့ဘက် ပိုရောက်သွားကြတာ များပါတယ်။
သူ့အလိုကိုပဲ လိုက်ဖြည့်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်နဲ့ပဲ သူတို့ဟာ ဖယ်ကြဉ်ခံနေရပါစေ လူတွေကို ဂရုစိုက်တတ်သူဆို သူတို့အလိုဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ပေးတတ်ကြတယ်။ ဘယ်လိုပြောမလဲ အလိုက်သိတတ်လွန်းတယ်ပဲ ပြောရမလား.. သူဟာ လူရာဝင်ချင်ကြောင်း သူတို့နဲ့အတူတူ စိတ်တူကိုယ်တူရှိကြောင်း ပြချင်နေတာနဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုတောင် ဖယ်ကြဉ်တတ်တဲ့ စိတ်ထားရှိသူတွေရဲ့ အလိုကို လိုက်လုပ်ပေး နေထိုင်ပေးနေတာတွေကို မြင်ဖူးတယ်မလား။ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ် အသက်မရှင်ရ သူများအလိုကို ဖြည့်ပေးချင်တဲ့လူဟာ အရူးနဲ့မခြားပါဘူး။ ကိုယ်ကတော့ ဘယ်တော့မှ လူတစ်ဖက်သားကို မပေါင်းချင်သလိုလို ဖယ်ကြဉ်သလိုလို မလုပ်တာလည်း လူပီသခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။
Related Article >>> အတွေ့အကြုံချင်းမတူရင်၊ ခံစားချက်ချင်းမတူနိုင်ပါဘူး
ငါ ဘာအမှားလုပ်လို့လဲ သူတို့တွေးကောင်းတွေးမှာပဲ။ လူပဲ တစ်ယောက်တည်း နေတတ်တဲ့ အမျိုးမှ မဟုတ်တာ ကိုယ်ကျင်လည်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘေးရောက်နေတဲ့သူ၊ ဖယ်ကြဉ်ထားတာမျိုးကို ကြုံရင် ငုံ့ခံဖို့ထက် သူ့ကိုချန်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို မကောင်းကြံချင်လာမှာပဲ ။ မနာလိုလို့ လိုက်ဖိုက်တာက သပ်သပ်ပေါ့နော်။အကောင်းဘက်က တိုးတက်ဖို့လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကိုတောင် သူသိသလောက်နဲ့ နည်းနည်းတော့ နှောက်လိုက်ရမှ ဆိုတာတွေဖြစ်လာတယ်။ အဲ့ဒီတော့ လူတွေက သူ့ကိုမုန်း သူကလူတွေကို မုန်း နဲ့ ဘယ်မလဲ ကောင်းတဲ့အရာတွေ။ ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်ကို ဖယ်ကြဉ်တာ မကောင်းဘူးလို့ ဆိုတာပေါ့..
အဲ့ဒါတွေက အသက်ငယ်တဲ့သူတွေမှာ ပိုတွေ့ရတယ်။ သူတို့ကို တစ်ယောက်တည်းဖြစ်သွားပြီ မခေါ်တော့ဘူး ပြောကြည့်ပါလား.. ငိုတာ ငိုတာ ဆိုတာလေ ကြည့်မကောင်းဘူး။ အသက်ကြီးလာတဲ့သူတွေကကော ဘာမှ မထူးပါဘူး ငိုလို့မကောင်းလွန်းလို့သာ မသိသလို သိသလိုလို လုပ်နေရတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ ကိုယ်လေးစားရသူကများ မခေါ်မပြောသလိုလို လူရာမဝင်တဲ့ပုံစံများ ဆက်ဆံမိရင် ဝမ်းနည်းတတ်လာတာပဲ။ မျက်ရည်လွယ်သူဆို ငိုချင်ငိုမှာပေါ့ ။ အသက်ကြီးလာရင် ဟန်ဆောင်ရတာတွေ များလာတယ်လေ။ တစ်ချို့တွေကတော့ ကိုယ်ကနိုင်ရမှန်း သိရင် ပိုလုပ်ပြတတ်တာပါပဲ။ ကိုယ်က ကောင်းအောင်နေပါရဲ့နဲ့ ဖယ်ကြဉ်တာတွေကြုံလာ ရ ရင် မခံစားနိုင်လောက်လောက်အောင် ငုံ့ခံနေခဲ့ရရင် ဒီလိုမကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ရဲရဲသာ ထွက်လာလိုက်ပါလို့။
Related Article >>> ခံစားချက်တွေပေးတဲ့ဂီတ
ကိုယ်ဟာ အသုံးမဝင်သူလို့ တွေးမိလာတယ်။
ကိုယ်တွေဆို သူငယ်ချင်းတွေကို အားပေးခဲ့ရဖူးတယ်။ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အသုံးမလိုတော့တဲ့ သူတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေပြီလားလို့ ဆိုက်ကို ဝင်လာတာမျိုးပေါ့။ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဆိုတွေ့ဖူး တယ် သူတို့အတွက် အသုံးမဝင်တော့ဘူးလို့ ထင်ရင် ပေါ်တင်မပြောဘူး ဖယ်ကြဉ်တဲ့ နည်းနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို မထွက် ထွက်အောင်လုပ်နေတာမျိုး။ မြင်ရတာ တကယ်ကို စိတ်မချမ်းသာစရာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင်နေတာက အကောင်းဆုံးပါ။ စိတ်ဓာတ်သိပ်မပြည့်ဝတဲ့ နေရာကို ရောက်ခဲ့ရင် ဆင်ခြင်ပြီး အမုန်းပွားမဲ့ ကိစ္စတွေကို ရှောင်လိုက်ပါ ။ ဘယ်အရာမဆို ကိုယ်က တစ်ဖက်စွန်းရောက်လွန်းခဲ့ရင် အများနဲ့မတူခဲ့ရင် ဖယ်ကြဉ်ခံရတတ်ပါတယ် ။ ကိုယ်က ဒါမျိုးကြုံခဲ့ရရင်တော့ ငါဟာ သုံးစားမရတော့ဘူးလား အသုံးမဝင်တဲ့သူတစ်ယောက်လားလို့ သိပ်အတွေးမချော်ပါနဲ့။ ဒါဟာ နေရာမှန် လူမှန် မရောက်သေးတာ သက်သက်ပါ။
ဘာသာရေးဘက်က ပြန်ကြည့်ရင် ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူ အဟောင်းပါပဲ။ ငါ့တုန်းက ဒီလိုကြုံရတယ် နောက်လူတွေကို ဒီလိုမဖြစ်အောင် သတိပေးမယ် ဆုံးမမယ် ပြောသင့်ပြောထိုက်သူဆို ပြောပြမယ်လို့တွေးပါ။ ငါ့တုန်းက ဒီလိုကြုံရတယ် သူတို့ကိုပြောတာ လုပ်တာ ဘာမှတောင်မဟုတ်ဘူးလို့ ကိုယ့်အဖြစ်နဲ့ယှဉ် စိတ်ဓာတ် ယုတ်သူလည်း ရှိမယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတစ်ယောက်ကို ဖယ်ကြဉ်တာက ကောင်းတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ် ။ ဖယ်ကြဉ်ခံရ ရင်လည်း ကိုယ်လိုအပ်တာကို ကိုယ်သိအောင်လုပ် ပြင်သင့်တာပြင်ဖို့တွေးပါ။ တစ်ချိန်လုံး ငါက အရမ်းတော်လို့ ငါ့ကို မနာလိုလို့ လုပ်ကြတာလို့ပဲ မတွေးနဲ့ပေါ့။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ဖယ်ကြဉ်ခံ ရသူတွေ့နေရင် ရှိနေရင် အားပေးပါ လျစ်လျူမရှုပါနဲ့။ အကြံပေးလို့ရတဲ့အခြေနေဆို အကြံပေးပါလို့။ဝဋ်ဆိုတာ လည်တတ်တဲ့အမျိုးပါ ယောင်းတို့ရယ်။
ကိုယျ့တုနျးကလညျး ဒါမြိုးအလုပျခံခဲ့ရတာ.. သူမြားကိုလညျး ဒီလိုလုပျလိုကျမယျဆိုရငျတော့ မဟုတျသေးဘူးနျော….
နညျးနညျးတော့ ခံရဖူးမယျ မသိမသာကော သိသိသာသာကော ဖယျကွဉျခံရတာတှရှေိခဲ့ဖူးမယျ။ ကိုယျကလညျး သူမြားကို ဖယျကွဉျခဲ့ဖူးတာတှရှေိရငျလညျး ရှိဖူးမယျ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျလုပျခဲ့တာတှကေိုတော့ မတေ့တျကွပွီး ကိုယျ ဖယျကွဉျခံထားရတာကိုတော့ မမတေ့တျတာဟာ သဘာဝပါ။ ဆိုတော့ ကိုယျကလညျး သူတဈပါးကို အကွောငျးအမြိုးမြိုးပွ ဖယျကွဉျခဲ့ဖူးသလို ကိုယျ့ကလြညျး အကွောငျးရငျး မယျမယျရရ တောငျ မရှိဘဲ ဖယျကွဉျကွတာမြိုးက ဖွဈနကေလြို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
ဒီလို ဖယျကွဉျခံရတာကို အဓိပ်ပာယျဖှငျ့မယျဆိုရငျ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ စိတျဓာတျမကောငျးလှနျးလို့ ဖယျကွဉျရတာမြိုး၊ ကိုယျ့ထကျသာမနာလိုစိတျကွောငျ့ ဖယျကွဉျတာမြိုး အမြိုးမြိုးပေါ့။ ဒီထဲမှာမှ လူ့အသိုငျးအဝိုငျးကို ဆိုးဆိုးရှားရှား ဒုက်ခပေးနတေဲ့ လူမြိုးကလှဲရငျတော့ အကွောငျးရငျးမရှိဘဲ တဈဖကျသားကို ဖယျကွဉျတာမြိုးက သိပျတော့ အဓိပ်ပာယျမရှိပါဘူး။
တကယျလို့ လုပျခဲ့မယျဆိုရငျလညျး အဲဒီလူရဲ့ တုနျ့ပွနျမှုအားက ကွောကျစရာတောငျ ကောငျးပါတယျ။ သူ့စိတျအခွအေနပေျေါမူတညျပွီး လုပျခငျြတာတှေ လုပျတာမို့ ပိုဆိုးလာတာတှလေညျး ရှိတတျပါတယျ။ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြက ကိုယျ့ကို ဖယျကွဉျထားတာမြိုးပဲဖွဈဖွဈ၊ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြကနေ အခွားတဈယောကျကို ဖယျကွဉျထားတာမြိုးပဲဖွဈဖွဈ ဖွဈတတျတဲ့ သဘောတှကေတော့ အတူတူနီးနီးပါပဲ..
Related Article >>> အထီးကနျြနတေဲ့ အခြိနျမှာ ဒါလေးတှေ လုပျကွညျ့ကွပါ။
ဘယျသူပဲ ဖယျကွဉျခံထားရသညျဖွဈပါစေ၊ လူတှေ ဖယျကွဉျခံရပွီဆိုတဲ့အခါ…
ဖယျကွဉျခံရသူတိုငျးရဲ့ တိုကျကှကျက ဒါပဲလေ ရှဲ့လုပျမှာပဲ။ ကိုယျ့ကို ဖယျကွဉျသူက ဒါမကွိုကျဘူးဆို ဒါခညျြးပဲလုပျတယျ။ ဘာလို့ဖယျကွဉျတုနျးလို့ သူတို့ စဉျးစားခငျြမှ စဉျးစားမယျ၊ လူပဲ လူကွားထဲပဲ နခေငျြမှာပေါ့။ ကိုယျပါလာရငျပဲ မပြျောရတော့သလိုလို ၊ ကိုယျဝငျကစားရငျပဲ ရှုံးတော့မှာလိုလို ဘာအကွောငျးကွောငျ့ပဲ ဖွဈဖွဈ ရှဲ့လုပျတာက သဘာဝပါပဲ။ ကိုယျ့ထကျ တျောလို့ပဲ ဖယျကွဉျပါစေ၊ ထုံသလိုလို အ သလိုလိုမို့လို့ ဖယျကွဉျပါစေ၊ အရမျးတျောလှနျးလို့ပဲ အလိုလိုနရေငျး အမွငျကတျပွီး ဖယျကွဉျနပေါစေ ဘယျလိုပဲ ဖယျကွဉျကွဉျ၊ ဖယျကွဉျခံရတဲ့လူမှနျသမြှ နညျးနညျးလေးတော့ ရှဲ့လုပျပွလိုကျရမှဆိုတဲ့ အထဲကခညျြးပါပဲ။ တကယျက ရှဲ့လုပျတာက နောကျထားပါ.. လူတဈယောကျကို ဖယျကွဉျလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ အကွဉျခံရတဲ့သူသညျ ကောငျးတဲ့ဘကျထကျ မကောငျးတဲ့ဘကျ ပိုရောကျသှားကွတာ မြားပါတယျ။
သူ့အလိုကိုပဲ လိုကျဖွညျ့ဖို့ ကွိုးစားတယျ။
ဘယျလိုအကွောငျးကွောငျ့နဲ့ပဲ သူတို့ဟာ ဖယျကွဉျခံနရေပါစေ လူတှကေို ဂရုစိုကျတတျသူဆို သူတို့အလိုဆန်ဒတှကေို ဖွညျ့ပေးတတျကွတယျ။ ဘယျလိုပွောမလဲ အလိုကျသိတတျလှနျးတယျပဲ ပွောရမလား.. သူဟာ လူရာဝငျခငျြကွောငျး သူတို့နဲ့အတူတူ စိတျတူကိုယျတူရှိကွောငျး ပွခငျြနတောနဲ့ လူတဈယောကျကိုတောငျ ဖယျကွဉျတတျတဲ့ စိတျထားရှိသူတှရေဲ့ အလိုကို လိုကျလုပျပေး နထေိုငျပေးနတောတှကေို မွငျဖူးတယျမလား။ကိုယျစိတျနဲ့ကိုယျ အသကျမရှငျရ သူမြားအလိုကို ဖွညျ့ပေးခငျြတဲ့လူဟာ အရူးနဲ့မခွားပါဘူး။ ကိုယျကတော့ ဘယျတော့မှ လူတဈဖကျသားကို မပေါငျးခငျြသလိုလို ဖယျကွဉျသလိုလို မလုပျတာလညျး လူပီသခွငျးတဈမြိုးပါပဲ။
Related Article >>> အတှအေ့ကွုံခငျြးမတူရငျ၊ ခံစားခကျြခငျြးမတူနိုငျပါဘူး
ငါ ဘာအမှားလုပျလို့လဲ သူတို့တှေးကောငျးတှေးမှာပဲ။ လူပဲ တဈယောကျတညျး နတေတျတဲ့ အမြိုးမှ မဟုတျတာ ကိုယျကငျြလညျရာ ပတျဝနျးကငျြမှာ ဘေးရောကျနတေဲ့သူ၊ ဖယျကွဉျထားတာမြိုးကို ကွုံရငျ ငုံ့ခံဖို့ထကျ သူ့ကိုခနျြထားတဲ့ အဖှဲ့အစညျးကို မကောငျးကွံခငျြလာမှာပဲ ။ မနာလိုလို့ လိုကျဖိုကျတာက သပျသပျပေါ့နျော။အကောငျးဘကျက တိုးတကျဖို့လုပျနတေဲ့ ကိစ်စတှကေိုတောငျ သူသိသလောကျနဲ့ နညျးနညျးတော့ နှောကျလိုကျရမှ ဆိုတာတှဖွေဈလာတယျ။ အဲ့ဒီတော့ လူတှကေ သူ့ကိုမုနျး သူကလူတှကေို မုနျး နဲ့ ဘယျမလဲ ကောငျးတဲ့အရာတှေ။ ဒါကွောငျ့ လူတဈယောကျကို ဖယျကွဉျတာ မကောငျးဘူးလို့ ဆိုတာပေါ့..
အဲ့ဒါတှကေ အသကျငယျတဲ့သူတှမှော ပိုတှရေ့တယျ။ သူတို့ကို တဈယောကျတညျးဖွဈသှားပွီ မချေါတော့ဘူး ပွောကွညျ့ပါလား.. ငိုတာ ငိုတာ ဆိုတာလေ ကွညျ့မကောငျးဘူး။ အသကျကွီးလာတဲ့သူတှကေကော ဘာမှ မထူးပါဘူး ငိုလို့မကောငျးလှနျးလို့သာ မသိသလို သိသလိုလို လုပျနရေတယျ။ ကိုယျခဈြတဲ့သူ ကိုယျလေးစားရသူကမြား မချေါမပွောသလိုလို လူရာမဝငျတဲ့ပုံစံမြား ဆကျဆံမိရငျ ဝမျးနညျးတတျလာတာပဲ။ မကျြရညျလှယျသူဆို ငိုခငျြငိုမှာပေါ့ ။ အသကျကွီးလာရငျ ဟနျဆောငျရတာတှေ မြားလာတယျလေ။ တဈခြို့တှကေတော့ ကိုယျကနိုငျရမှနျး သိရငျ ပိုလုပျပွတတျတာပါပဲ။ ကိုယျက ကောငျးအောငျနပေါရဲ့နဲ့ ဖယျကွဉျတာတှကွေုံလာ ရ ရငျ မခံစားနိုငျလောကျလောကျအောငျ ငုံ့ခံနခေဲ့ရရငျ ဒီလိုမကောငျးတဲ့ ပတျဝနျးကငျြကနေ ရဲရဲသာ ထှကျလာလိုကျပါလို့။
Related Article >>> ခံစားခကျြတှပေေးတဲ့ဂီတ
ကိုယျဟာ အသုံးမဝငျသူလို့ တှေးမိလာတယျ။
ကိုယျတှဆေို သူငယျခငျြးတှကေို အားပေးခဲ့ရဖူးတယျ။ သူ့ပတျဝနျးကငျြမှာ အသုံးမလိုတော့တဲ့ သူတဈယောကျလို ဖွဈနပွေီလားလို့ ဆိုကျကို ဝငျလာတာမြိုးပေါ့။ လုပျငနျးခှငျတှမှောဆိုတှဖေူ့း တယျ သူတို့အတှကျ အသုံးမဝငျတော့ဘူးလို့ ထငျရငျ ပျေါတငျမပွောဘူး ဖယျကွဉျတဲ့ နညျးနဲ့ လူတဈယောကျကို မထှကျ ထှကျအောငျလုပျနတောမြိုး။ မွငျရတာ တကယျကို စိတျမခမျြးသာစရာပါ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ လိုကျလြောညီထှေ ဖွဈအောငျနတောက အကောငျးဆုံးပါ။ စိတျဓာတျသိပျမပွညျ့ဝတဲ့ နရောကို ရောကျခဲ့ရငျ ဆငျခွငျပွီး အမုနျးပှားမဲ့ ကိစ်စတှကေို ရှောငျလိုကျပါ ။ ဘယျအရာမဆို ကိုယျက တဈဖကျစှနျးရောကျလှနျးခဲ့ရငျ အမြားနဲ့မတူခဲ့ရငျ ဖယျကွဉျခံရတတျပါတယျ ။ ကိုယျက ဒါမြိုးကွုံခဲ့ရရငျတော့ ငါဟာ သုံးစားမရတော့ဘူးလား အသုံးမဝငျတဲ့သူတဈယောကျလားလို့ သိပျအတှေးမခြျောပါနဲ့။ ဒါဟာ နရောမှနျ လူမှနျ မရောကျသေးတာ သကျသကျပါ။
ဘာသာရေးဘကျက ပွနျကွညျ့ရငျ ပွုသူအသဈ ဖွဈသူ အဟောငျးပါပဲ။ ငါ့တုနျးက ဒီလိုကွုံရတယျ နောကျလူတှကေို ဒီလိုမဖွဈအောငျ သတိပေးမယျ ဆုံးမမယျ ပွောသငျ့ပွောထိုကျသူဆို ပွောပွမယျလို့တှေးပါ။ ငါ့တုနျးက ဒီလိုကွုံရတယျ သူတို့ကိုပွောတာ လုပျတာ ဘာမှတောငျမဟုတျဘူးလို့ ကိုယျ့အဖွဈနဲ့ယှဉျ စိတျဓာတျ ယုတျသူလညျး ရှိမယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ လူတဈယောကျကို ဖယျကွဉျတာက ကောငျးတဲ့ကိစ်စ မဟုတျတာတော့ သခြောပါတယျ ။ ဖယျကွဉျခံရ ရငျလညျး ကိုယျလိုအပျတာကို ကိုယျသိအောငျလုပျ ပွငျသငျ့တာပွငျဖို့တှေးပါ။ တဈခြိနျလုံး ငါက အရမျးတျောလို့ ငါ့ကို မနာလိုလို့ လုပျကွတာလို့ပဲ မတှေးနဲ့ပေါ့။ ကိုယျ့ရှမှေ့ာ ဖယျကွဉျခံ ရသူတှနေ့ရေငျ ရှိနရေငျ အားပေးပါ လဈြလြူမရှုပါနဲ့။ အကွံပေးလို့ရတဲ့အခွနေဆေို အကွံပေးပါလို့။ဝဋျဆိုတာ လညျတတျတဲ့အမြိုးပါ ယောငျးတို့ရယျ။
Tags: environment, Experience sharing, ignore, Knowledge, opinion, people, work
Wai Zin March 24, 2018